PSG oo beenisay in ay Agaasimaha Isboortiga u magacaabi doonto macallinkii hore ee Arsenal Wenger – Gool FM
(Paris) 23 Feb 2019. Guddoomiyaha kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska Nasser Al-Khelaifi ayaa beeniyay wararka sheegaya in kooxdiisu ay Agaasimaha dhanka Isboortiga u magacaabi doonto tababarihii hore ee naadiga Arsenal, Arsene Wenger.
Wenger ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tegay Arsenal xagaagii hore, kaddib 22 sanadood oo uu naadigaasi macallin u ahaa.
Ganacsadaha Reer Qatar Al-Khelaifi oo u warramayay L’Equipe ayaa waxa uu yiri “xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya Wenger, waan isu dhow nahay, waxaana garanayaa muddo dheer, waa tababare heer sare ah isla markaana leh aqoon duruqsan oo dhanka kubadda cagta ah”.
“laakiin waxaan leenahay Agaasime, Antero Henrique, kaas oo aan kalsooni weyn ku qabno, waxaan maqlaa warbaahinta oo leh Wenger ayaa shaqadaasi loo dhiibayaa, arrintaasi waa laga bad badiyay, ee fadlan aanshaqeyno” ayuu sii raaciyay Al-Khelaifi.
Dhanka kale Arsene Wenger ayaa xusay in uu rajeynayo in dhammaadka xilli ciyaareedkan uu dib ugu soo laabto kubadda cagta.
Klopp "Tababare Solskjaer khadka ayuu ku soo celiyay Manchester United taasina waa mid iska cad”